လူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံများ ပိုသိရှိလာစေရန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအစည်းအဝေးပြုလုပ် | Local Resources Centre
Khaing Pwint Aung Thursday, October 31st, 2019
လူငယ်များနှင့် အမျိုးသမီးများ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံများ ပိုသိရှိလာစေရန်နှင့် ရရှိထားသော အသိပညာဗဟုသုတများ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိရန် ရည်ရွယ်၍ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက် ၊ ဒိုင်ပြကုန်းကျေးရွာရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးပွဲသည် လက်တွဲညီညီရှေ့သို့ချီ စီမံကိန်းဖြင့် ထောက်ပံ့ငွေရအဖွဲ့ဖြစ်သော အားသစ်ရောင်ခြည်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဆရာမအဖွဲ့ လုပ်တဲ့ပွဲကို မတက်ရောက်ဖူးဘူး။ ဒါက သူလုပ်တဲ့ပွဲမှာ ပထမဆုံး တက်ရောက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားအဖွဲ့က လုပ်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းတွေ ဒီလို ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံတွေ သုံးခေါက် လေးခေါက်လောက်‌ တက်ရောက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီစည်းဝေးပွဲက ကောင်းတယ်လို့ မြင်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ် သင်တန်းတက်ခဲ့လို့ ရလာတဲ့ ဗဟုသုတတွေ မမေ့အောင် လုပ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအစည်းအဝေးမှာ တက်ရောက်လာသူဆီကနေ ဗဟုသုတလည်း ရရှိစေပါတယ်။ ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေ ထပ်သင်ယူဖို့ အများကြီးလိုအပ်တယ်။ လူငယ်တွေကလည်း လူ့အခွင့်အရေးသင်တန်းလိုမျိုး ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံ/နှုန်းများသင်တန်းတွေလို အများကြီးလိုအပ်တယ်။ လူငယ်တွေ ဗဟုသုတတွေ နည်းနေသေးတယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒီအစည်းအဝေးပွဲကို လုပ်ပေးတဲ့ ဒီကဆရာမ ကြည်ကြည်ဝင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကူညီးပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်း များကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” ဟု အစည်းအဝေးပွဲသို့တက်ရောက်လာသူ အသက် ၂၉နှစ်အရွယ်ရှိ ၊ အောက်ပိန္ဒဲတော ကျေးရွာမှ စောသန်းဇော်မှ ၎င်း၏ အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ယခင်အခြေအနေနှင့် ယခုအခြေအနေ ကွာခြားပုံကိုလည်း “လူ့အခွင့်အရေးကို အရင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ခုအခြေအနေမှာ တော်တော်လေးကို ကောင်းလာနေပါပြီး။ ဦးတို့အရင်ကဆို လူ့အခွင့်အရေးမပြောနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့နွားကို ကိုယ့်အရှေ့မှာတင် ဆွဲခေါ်သွားတာတောင် ပြောလို့မရဲဘူး။ ပြောရင်တော့ အသတ်ခံရမှာလေ။ ဘယ်ပြောရဲမလဲ။ အရမ်းလည်း ခက်ခဲတယ်။ ခုဆိုရင် လူငယ်တွေ ပြောခွင့်ဆိုခွင့်တွေ ရှိလာတာ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။ တိုးတက်လာတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုလား? အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့။ ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိ သလို ဆိုးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကြားမှာမှ ဟိုယိမ်ဒီယိမ်တဲ့ ခေါင်း‌ဆောင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဦးဖြတ်သန်းလာတစ်လျှောက်ကိုလား? အင်း အမျိုးမျိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့ ကြုံရနည်းတယ်။ ဒီသင်တန်းက ဦးအမြင်တော့ အရမ်းကောင်းတယ်။ လူသားဖြစ်တည်ကတည်က ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ လူငယ်တွေသိလာတယ်။ ဦးတို့ငယ်ငယ်က ဒါတွေ မရှိဘူး။ သိလည်းမသိဘူး” ဟု ဝင်းပရကျေးရွာမှ ဦးဘဝင်းမှလည်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။